Jacaylka Iyo Guurka - Nooca Wakaaladda | Martech Zone
Jacaylka Iyo Guurka - Nooca Wakaaladda
Tuesday, April 8, 2014 Khamiis, Juun 18, 2015 Douglas Karr
Hay'addayada, Highbridge, wuxuu jiray muddo ka badan 5 sano hadda wuxuuna dhawaan ku dhawaaqay isbeddel dhabbihii. Sanadkii la soo dhaafey, runti waan cidhiidhi gelinay shaqaalaheena waxaanan markaa kadib qaadanay macaamiil fara badan oo dhib badan taas oo ku sigatay inay dhinto.
Waxaan dhisnay xiriiro aan caadi aheyn oo aan la yeelanay macaamiil layaableh - kuwaas oo badankood inala joogay sannado badan. Waan jecel nahay iyaga oo waxaan rajeynaynaa inay na jecel yihiin - ma aha oo kaliya jeeg, laakiin waa hamigeenna. Ma jiraan wax naga farxad geliya marka aan aragno macaamiisheenna oo guuleysta, mana jiraan wax ka xanaaq badan marka xiriirka uu xumaado.
Waqti badan ayaan ku lumiyaa hadda waxaan la shaqeeyaa rajada si aan u hubiyo inaan labadeenaba u heellannahay wax weyn guurka oo labaduba waxay raadinayaan xiriir jacayl. Waxaan rabaa inaan ka fogaado inaan galo xiriir dhib badan qiime kasta - iyadoon loo eegin cabirka kaqeybgalka. Xidhiidhka xun ma aha oo kaliya inuu dhaawacayo macmiilka ku lugta leh - wuxuu saameyn ku yeelan karaa macaamiishaada oo dhan maaddaama waqtigaaga iyo tamartaadu ay daalan yihiin isku dayga lagu badbaadinayo ka-qaybgalka dhibaatada leh. Haddii aan ku aqoonsan karno qaar ka mid ah astaamaha macmiilka dhibta badan ee habka iibinta, waxay inaga badbaadin kartaa dhammaanteen xanuunno badan oo wadada soo mara.
Waxaan dooneynay xoogaa baashaal ah isla markaana aan xoogaa iftiin ah galino waqtiyadan mugdiga ah ... markaa qormadan xog uruurintu waxay liis garaysaa tusaalooyin qaar ka mid ah noocyada cilaaqaadka aan, nasiib daro, ku qasbanahay inaan ka fogaanno! Isbarasho Jacaylka iyo Guurka - Nooca Wakaaladda.
Tags: hay'addamacmiilkajacayl iyo guurguurkaxiriirka
Tilmaamaha A ilaa Z ee Shahaadada Shakhsi ahaaneed
Dhibaatada “Xog Weyn”
Apr 8, 2014 at 11: 33 AM
Haa haa! Waan sugayay midaas! Ku faraxsanahay inaan arko ugu dambeyntiina u soo baxdo daawashada dadweynaha! Cajiib ah!
Apr 8, 2014 at 10: 16 PM
Waxaan u maleynayaa inaan la joogay dhowr ka mid ah xaasaskan, ma jiraa koox daaweyn ah oo u dhow?
Apr 8, 2014 at 10: 50 PM
Waxaan u maleynayay inay tahay waxa aan sameynay toddobaad kasta!
Apr 11, 2014 at 12: 12 PM
murugo aad u run ah! Si wanaagsan ayaa loo qabtay, hadda waxaad u baahan tahay oo keliya inaad dhisto kedis ay macaamiisha mustaqbalku qaadan karaan si ay si dhuumaaleysi ah ugu shaandheeyaan!
Apr 20, 2014 at 12: 59 PM
JACAYLKA IYO GUURKA (Nooca Wakaaladda) - Wanaagsan! 🙂